Ungawususa kanjani umlando namakhukhi kuFirefox | Izindaba zamagajethi
Ungawuphatha kanjani umlando namakhukhi kuFirefox?
Uma upheqa i-Intanethi nsuku zonke kuFirefox, mhlawumbe-ke unenzuzo encane kunezinye iziphequluli ezahlukahlukene, lokhu ngoba kule ongafinyelela kuyo ngezifiso izici ezithile ezibandakanya ubumfihlo. Ngokuqondile, indlela esingaphatha ngayo umlando namakhukhi yinto elula kakhulu kunalokho ebesingakubabaza kunoma yisiphi esinye isiphequluli.
Isibonelo, uma kumzuzwana othile kuvela amakhasi wewebhu ongawacelanga futhi ufuna ukuwasusa kumlando wakho, ungakwenza ngokuthula ngendlela eqondene nawe ngaphandle kokukhipha lonke uhlu. Isimo esifanayo singenziwa ngamakhukhi, okungukuthi, ngeke kudingeke siwaqede wonke kepha kunalokho, ambalwa angabaluleka kakhulu kithi futhi ukuthi akekho omunye umuntu okufanele abone, bonke abanezeluleko namasu amancane esizokunikeza wona ngezansi.
1 Izindlela ezahlukahlukene zokuphatha umlando kuMozilla Firefox
2 Kususwa ngokukhethekile amakhukhi
Izindlela ezahlukahlukene zokuphatha umlando kuMozilla Firefox
Noma ngabe sifuna ukuphatha amanye amakhasi wewebhu womlando wokuphequlula, noma futhi sidinga ukuphatha amakhukhi athile ngendlela eqondene nomuntu kuFirefox, zombili izinto kuzofanele zibe phatha kusuka endaweni efanayo ngaphakathi kwalesi siphequluli; Ukuze senze lokhu, kufanele sifike kuleyo ndawo ngale ndlela elandelayo:
Kufanele sivule isiphequluli sethu seMozilla Firefox.
Manje sizongena endaweni yezinketho (izinketho -> izinketho).
Kusuka ewindini elibonisiwe kufanele siye "Kobumfihlo" beribhoni ebekwe phezulu kwesibonisi.
Kukule ndawo lapho sizonikela khona isikhathi esithile ukuze sisebenze. Lapha sizoncoma izigaba ezihlukaniswe kahle ezi-3, okuyilezi:
Okwamanje kungumsebenzi wethu kuphela ukubhekana nakho konke okuphathelene nomlando wokuphequlula i-Firefox, ngakho-ke sizogxila kakhulu kule ndawo yomsebenzi. Lapho sinezinketho ezimbalwa zokukwazi ukuphatha ngokushesha nangempumelelo. Isibonelo, engxenyeni yokuqala yale ndawo kunenketho ethi:
IFirefox izokwenza lokhu:…
Lapho sinenkinobho yokudonsela phansi, lapho singakhetha khona uma sifuna ukuthi umlando usindiswe noma umane ufane ungabhaliswa kukho konke ukuvakasha esikwenza kuwebhu. Ngokuzenzakalelayo, le nketho itholakala ku- "Khumbula umlando", lokhu kuyisizathu sokuthi ikhasi ngalinye lewebhu esivakashelayo lizobhaliswa ohlwini.
Ukuqhubeka kancane phansi kunenketho yokuxhumana (eluhlaza okwesibhakabhaka), ethi «sula umlando wakho wakamuva«; Uma sichofoza kuso sizogxumela kwelinye iwindi elincane le-pop-up, lapho singahlanza khona umlando okhiqizwe ihora eledlule noma okuningi ngaphambili.
Singakwazi futhi ukuqeda lo mlando ngokukhetha, ngenxa yokuthi kude kancane kunezinketho ezithile ezingenziwa zisebenze ngebhokisi lazo ukuziqeda ngasikhathi sinye. Uma sizofuna le ndlela, kuphela kuzofanele sikhethe la mabhokisi bese inkinobho ethi "hlanza manje" futhi akukho okunye.
Kususwa ngokukhethekile amakhukhi
Ngakolunye uhlangothi lwesixhumanisi esilichofoze phambilini futhi esivumele ukuthi sihlanze umlando wakamuva kukhona omunye ongeziwe, okuzosisiza «Susa amakhukhi ngawodwana» noma njengoba besingasho, ngendlela eyenziwe yaba ngeyakho.
Le yingxenye ethakazelisa kunazo zonke, ngoba ukuchofoza kulesi sixhumanisi kuzophinda kuveze iwindi lokuzivelela ngezinketho ezithokozisayo ukuze sikwazi ukusebenza. Kuleli windi wonke amakhukhi abhalisiwe azovela ngokusebenzisa ukuphequlula kwethu nge-Inthanethi. Phezulu kunesikhala "sokusesha", lapho kuzodingeka kuphela sibeke igama kuwo wonke amakhukhi ahlobene nalo ukuze avele.
Isibonelo, uma esikhaleni esishiwoyo sibhala igama elithi YouTube, bazovela ngokushesha ezansi uhlu olunalawo wonke amakhasi esiwavakashele futhi ezihlobene ngqo nale ngosi yevidiyo. Uma singafuni ukuthi lawa makhukhi (ayingxenye yomlando) abhaliswe lapha, kuzofanele senze ukukhetha kwabo bonke labo esifisa ukubaqeda. Kulokhu singasebenzisa ukhiye womabili Shift njenge-CTRL ukuze ukwazi ukukhetha amakhukhi ndawonye noma kude, esimweni lapho singafuni ukukuqeda konke ngasikhathi sinye.
Njengoba ukwazi ukubabaza, inqubo esiyithathile yokuqedwa kwamakhukhi namakhasi ambalwa ayingxenye yomlando wethu wokuphequlula kuyinto elula ukwenza kuMozilla Firefox.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungawuphatha kanjani umlando namakhukhi kuFirefox?
Ungaba kanjani nama-akhawunti amaningi we-Hotmail ngokuhlangana okukodwa
Ungangeza kanjani ukuxhumeka kwe-inthanethi okubili kukhompyutha eyodwa